🥇 ▷ Sida barnaamijyadaada iyo fiidiyowgaaga loogu diyaariyo barta Instagram ✅
Waxaa jira qaaciidooyin kala duwan oo loogu talagalay jadwal u samee jadwalka Instagram. Ma ogid? Badiyaa waa maamulaha bulshada ama kuwa keydiya xisaabaadka dadka kale, ama shirkadaha, ee adeegsada aaladahaas. Waana wax faaido leh in sawirro iyo fiidiyowyo la diyaariyo si looga fogaado in la soo daayo waxyaabo ka kooban waqtiyo ama waqtiyo ay tahay inaad nolosha dhabta ah ku raaxaysato oo aadan ahayn nolosha dhabta ah. Hagaag, hadda Facebook, milkiilaha barta Instagram, wuxuu leeyahay aalado u gaar ah oo looga hortago inay adeegsadaan codsiyada gelinaya waxyaabahaaga gaarka kuu ah ama xad u leh hawshan.
Sida barnaamijka looga sameeyo Facebook Creator Studio
Kuwa aan isaga aqoon, Facebook Creator Studio waa guddi kontaroola oo runtii faa iido badan leh oo leh dhammaan xogta iyo aaladaha maaraynta ee bogga bogga. Facebook. Dib-u-eegista dhammaan qoraallada akoonka, illaa ogaanshaha is-dhexgalka, xogta dhagaystayaasha iyo faahfaahinta kale. Hagaag, qalabkani wuxuu leeyahay qayb u gaar ah Barta Instagram. Soo daah goor dambe, laakiin si buuxda u imow.
Hadana waad awoodaa maareyso dhinacyo kala duwan oo koontadaada ah Instagram halkan. Dib u eeg buugaagta, la kulan dhagaystayaasha iyo haa, sidoo kale jadwalka waraaqaha cusub. Qormooyin adadag oo wali ku jira astaantaada, laakiin sidoo kale fiidiyowyo loogu talagalay IGTV. Taas waa inaad sameyso.
Gal Facebook Abuuraha Studio la xogtaada Facebook. Hadaad isticmaaleysid sida inaad tahay maamule bulsho, waxaad fursad uheleysaa koontada Facebook ee horey loo abuuray
Ka dib eeg eegga kore bogga, halka ay ku yaalliin tabs si aad qaybta uga sooco Facebook Of Instagram-ka.
Si aad u gasho qaybtan waa inaad lahaataa a koontada ganacsiga ee Instagram. Ha walwelin, waad la qabsankartaa shaqsigaaga adigoon taasi keenin dhibaato ama inaad iska bixiso. Kaliya raac talaabooyinka shaashadda. Waxay ka kooban tahay tagista Instagram, gelitaanka astaantaada, dhagsii boggaga Tafatirka, iyo ku dar bogg Facebook la xiriira. Waad abuuri kartaa mid aan lahayn wax ka koobnaanta munaasabadan maadaama waxa ugu muhiimsan ay tahay in la haysto, ma quudinayso.
Haddii aan hore u haysan lahayn boggayaga Facebook, waa inaan ku qasbanaano kuxiir koontadayada Instagram-ka oo leh Facebook Creator Studio bogga sare ee shabakadda. Waxaan bilaabeynaa kalfadhiga waana tagnaa.
Qaybtan gudaheeda waxaan ku arki doonaa daabacaadaha akoonteenna Instagram, oo u kala qaybsan sawirrada iyo fiidyowyada. Intaa waxaa dheer, waan awoodnaa hubi tirakoobka iyo xaaladda dhammaantood. Laakiin waxa ugu muhiimsan waa inaad karti u yeelato inaad halkan ka sameysid daabacaado cusub. Wax noo oggolaanaya, marka lagu daro, inaan ku daabacno koontadayada tooska ah ee kombuyuutarka tooska ah ee ‘Instagram’.
Kaliya riix batoonka Abuur post, geeska bidix ee sare ee dariishadda. Tani waxay ku tusaysaa liistada dhinaca midigta ah si loogu daro cinwaan, sumad goob iyo waxa ku jira, midkood sawir ama muuqaal. Waxaan xitaa sameyn karnaa qaab maareyn qaabka ah sida jajabinta ama doorashada qaab qaab dhismeedka.
Waxa ugu muhiimsani waa markii la daabaco waxaan dooran karnaa hawsha Barnaamijyada badhanka buluugga-buluugga ah ee ku yaal geeska hoose ee midig. Halkan waxaa lagaa doonayaa oo keliya inaad doorato taariikhda iyo waqtiga daabacadda. Xadka kaliya ayaa ah in aan leenahay soohdin lix bilood ah oo la arko in la daabaco mustaqbalka.
In muddo ah hadda, hal dariiqo oo barnaamijkan lagu sameeyo waxaa ka mid ahaa codsiyada iyo adeegyada seddexaad. Dabcan, kuwanu ma lahayn rukhsado iyo ikhtiyaaryo aad u badan, oo xitaa waxay ku khasbeen adeegsadaha inuu shaqaaleeyo adeegyada lacag-bixinta si uu u fuliyo howlahan. Ama sidoo kale waxay khatar gelin karaan amniga koontadayada.
Mid ka mid ah codsiyada ugu dhameystiran, haddii aysan ahayn kuwa ugu badan, waa Hootsuite. Waxaa caan ku ah adduunka maamulka maareynta warbaahinta bulshada, waxay horeyba u leedahay ikhtiyaar ah in si toos ah loogu faafiyo barta Instagram, iyada oo aan la soo bandhigin ogeysiisyo sidaas darteed waa inaan sameynaa maamulka waqtigan aan rabno inaan daabacno. In kasta oo ay jiraan xulashooyin kale oo ka fudud sida Preview.
Iyada oo hootsuite
Kaliya soo dejiso oo dooro Instagram, ama shabakad kale oo bulsheed, oo ka mid ah xulashooyinka la maareeyo.
Shuruudda lagu leeyahay xisaabta Instagram Ganacsi ama xirfadle ayaa weli ah mid khasab ah kiiskan. Kaliya waa inaad dhex marto dejimaha Instagram, raadiso qaybta Koontada oo gal ikhtiyaarka Beddelka akoonka ganacsiga. Hawsha ayaa hagaysa oo bilaash ah. Intaa waxaa sii dheer, oo leh koonto ganacsi waxaad arki kartaa tirakoobka daabacaad kasta si faahfaahsan.
Mar gudaha adeegga Hootsuite, iyo ka dib hBixi ogolaanshaha daabacaada iyo maareynta, dhagsii riix Daabacaadda. Halkan waxaan ku qaban doonnaa jadwal si aan ku dhisno daabacaaddeena. Waxaan dooranaa taariikhda iyo waqtiga kadibna waxaan cayimaa cinwaanka daabacaadda iyo waxa ku jira. Dabcan, halkan kuma qori karno sawirka leh aaladda aaladda Instagram, waxay noqoneysaa inay ahaato nuxur hore loo soo nooleeyay. Oo diyaar u ah in la dhajiyo.
Waa codsi kale oo loo heli karo barnaamijyada ku jira dhammaan noocyada kala duwan ee Instagram. Xaqiiqdii, waa aalad sahlan, oo leh qaabeyn si aad ah loogu waafaqay adeegsadayaasha aan loo isticmaalin maaraynta shabakadaha bulshada badan.
Kaliya soo dejiso waxay ku xiraysaa koontada Instagram ee leh xogtayada. Kadib annaga weydiiso in la abuuro koonto adeegsade si loogu isticmaalo arjiga laftiisa.
Halkan waxaan ka sawiri karnaa Sawirro Horudhac, si aan u helno muuqaal guud oo diyaar ah. Codsigu wuxuu leeyahay aalado lagu falanqeeyo astaanteenna, laakiin sidoo kale leh miirayaasha si loogu dabaqo waxyaabaha kujira.
Waa inaan dooranaa mid uun sawirrada iyo guji astaanta rooti xagga hoose. Halkan waxaan ku tilmaami karnaa sharraxaadda, ku darno sumadaha horay loo sii calaamadeeyay oo aan ka helnaa kuwa kale oo shaqeynaya, iyo wax kasta oo ka sarreeya, taariikhda iyo waqtiga daabacadda. Dhammaantoodna waxay diyaar u yihiin inay iloobaan ku dhajinta dhejinta saacadaha aan caadiga ahayn.
Dabcan, adeegyada noocan ah iyo codsiyada iyagu maaha kuwo la isku halleyn karo oo ah howsha loo yaqaan ‘Facebook Creator’. Wax ay tahay inaan maskaxda ku hayno haddii aan ka tagno aaminaaddayada oo dhan kuwa barnaamijyada aan rasmiga ahayn. Mana aha wax ka fiican in la aamino kuwa iyagu maamusha ama leh shabakadda bulshada.